Maamulka Hiiraan Oo Sheegay Inuu Dhaqangalay Ammar Ay Kusoo Rogeen Ganacsatada – Goobjoog News
Maamulka Hiiraan Oo Sheegay Inuu Dhaqangalay Ammar Ay Kusoo Rogeen Ganacsatada
Maamulka Hiiraan ayaa sheegay in uu dhaqangalay ammar dhowaan ay kusoo rogeen ganacsatada gobolkaasi, kaa oo ku aadanaa in magaalada aan lasoo gelin lacago been abuur ah oo uga imaanayey deegaannada Puntland iyo sidoo kale deegaanno kale oo dalka ah.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo la hadlay Goobjoog News, ayaa sheegay in hadda wax walbo sidii loo rabay ay yihiin, ganacsatadana ay maqleen ammarkii maamulka.
“Howlaha sidii caadiga ahaa bay ku socdaan, ammarkii aan soo rognay waa ay qaateen ganacsatada, dhaq dhaqaaq walbo waa lala socdaa, wax eylo ah oo bulshada dhexdeeda ka taagan malah, sarifka waa sidiisii hore” ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka.
Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ay wadi doonaan mar walbo kormeerka ay ku hayaan ganacsatada gaar ahaan sarifleyda si aan gobolkaasi loo soo gelin lacag been abuur ah.
Lacago been abuur ah oo suuqayada B/weyne soo galay ayaa sababay in sare u kaco qiimaha raashiinka quudul daruuriga ah iyo sidoo kale sarifka lacagaha qalaad.
Wasiirka Amniga Puntland: Gacan Bir Ah Yaan Ku Qabaneynaa Raggii Kufsiga Ka Geystay Burtinle